Ugboro ole nke OTR rims na gịnị kpatara HYWG ji nwee uru?
Post oge: 03-15-2021
E nwere ụdị OTR dị iche iche, nke akọwapụtara site na usoro a ga-ekewa ya dị ka 1-PC rim, 3-PC rim na 5-PC rim. 1-PC rim na ọtụtụ-eji ọtụtụ ụdị nke ulo oru ugbo ala dị ka kreenu, wheeled excavators, telehandlers, trailers. 3-PC rim na-akasị ji grad ...GỤKWUO »
Bauma CHINA 2020 mere dị ka atụmatụ
Dị ka ihe omume kachasị mkpa na nke kachasị mkpa na Asia, ihe ngosi Bauma CHINA bụ ahia ahia mba ụwa maka igwe ihe owuwu, igwe ihe eji arụ ụlọ, ụgbọ ala na akụrụngwa, ma zubere ya maka ụlọ ọrụ, azụmahịa na onye na-eweta ọrụ ...GỤKWUO »
Ihe nkata na-akọ arụmọrụ arụmọrụ siri ike na 2020 na olu HYWG maka CAT amụbawo nke ukwuu
Caterpillar Inc bụ onye nrụpụta akụrụngwa kachasị n'ụwa. Na 2018, Caterpillar họọrọ nọmba 65 na ndepụta Fortune 500 na nọmba 238 na ndepụta Global Fortune 500. Caterpillar stock bu akuku nke Dow Jones Industrial Average. Katapila ...GỤKWUO »